अहिलेको राजनीतिक माहोलदेखि मलाई डर लाग्छ
२०७६ भदौ २२ आइतबार १४:२१:००
मनीषा कोइराला पछिल्लो समय गम्भीर र परिपक्व भूमिकामा आफ्नो चलचित्रको करियर मोड्दैछिन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– ‘प्रस्थानम’ । रिलिजको तयारीमा रहेको ‘प्रस्थानम’ मा मनीषा राजनीतिक परिवारको मुखियाकी श्रीमतीको भूमिकामा छिन् । यसै सन्दर्भमा ‘द हिन्दूस्तान टाइम्स’ले उनको बदलिँदो छनोटको बारेमा मनीषा कोइरालासँग कुराकानी गरेको छ ।
तपाईं नेपालको एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवारबाट हुनुहुन्छ । राजनीतिमा आउन दबाब भएन ?
हो, धेरैले भन्ने गर्छन् । नेपालमा अहिले कोइराला परिवारको तेस्रो पिँढी राजनीतिमा छन् । तर पछिल्लो समय भने कोही आइरहेको छैन । यहि कारण तपाईं आउनुपर्यो भनेर धेरैले भनिरहनु हुन्छ ।
नेपालको अहिलेको राजनीतिक माहोलसँग मलाई डर लाग्छ । के म अहिलेको राजनीतिक माहोलमा भिज्न सक्छु ? म यो माहोलबाट माथि आएर काम गर्न सक्छु होला र ? यो प्रश्नले सताउँछ मलाई । म एक कालाकार हुँ, त्यसैले म राजनीति गर्न सक्दिन जस्तो लाग्छ । फेरि कलाकार बनेर जुन आनन्दसँग जिन्दगी बिताइरहेकी छु, सायद यो हराउँछ होला । त्यसकारण मलाई लाग्दैन कि म कहिल्यै राजनीतिमा लाग्छु । म कलाकार हुँ र कलाकार बनेरै बस्न चाहन्छु ।
तपाईंले जिन्दगीमा धेरै उतारचढाव देखिसक्नु भएको छ । यदि यहि जिन्दगीलाई पुनः एकपटक बाँच्ने मौका पाउनुभयो भने आफ्नो कुनकुन गल्ती दोहोर्याउन चाहनुहुन्न ?
जिन्दगीलाई हेर्ने एउटामात्रै नजर हुँदैन । जिन्दगी जस्तो छ, हामीले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ । हामीबाट जुन त्रुटिहरू भएका थिए, त्यसलाई बदल्ने कोसिस गर्नुपर्छ, तर यो भन्नु गलत हुन्छ– यदि मलाई दोस्रो पटक जिन्दगी जिउने मौका मिल्यो भने म केहि परिवर्तन गर्न चाहन्छु ।
मैले केही अलग काम गरेको र निर्णय लिएको भए म यो ठाउँसम्म पुग्दिन थिएँ । आज म जहाँ छु, त्यहि निर्णयले गर्दा हो र म निकै खुशी छु । यदि मैले ती गल्तिहरु नगरेको भए, सायद म यो ठाउँसम्म पुग्न सक्दिन थिएँ । त्यसैले म आफ्नो गल्तीहरुप्रति पनि आभारी छु ।
यद्यपि ती गल्तिहरु थिए, जसमा मलाई कुनै गर्व भने छैन । मलाई यस्तो लाग्छ यदि मैले गल्तिहरु गरेकी थिएँ भने त्यो पनि जिन्दगीको एक पाटो नै हो । हामी पर्फेक्ट छौं भनेर सोच्नु भ्रम हो । हामी सबैमा कमजोरी र राम्रो पक्ष सबै हुन्छ । बितेको कुरा त बितेर गइहाल्यो । अहिले मसँग जे छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
‘प्रस्थानम’ चलचित्र विरासतको लडाइँमा आधारित छ । समाजमा पनि जब विरासत र परिवारको नेतृत्वको कुरा आउँछ, तब पुरुष नै अगाडि आउँछन् । महिलालाई पछाडि पारिन्छ । तपाईं यो कुरा मान्नुहुन्छ ?
चलचित्रको कुरा गर्ने हो भने मलाई लाग्छ, महिलाहरु आफ्नो कुरा खुलेर बताउन थालेका छन् । महिलाहरुमा त्यो ‘बोल्डनेस’ आइसकेको छ । उनीहरुसँग ‘स्ट्रोङ माइन्ड’ छ, जसलाई उनीहरु बिना कुनै डर अभिव्यक्त गर्न सक्छन् ।
अहिले हरेक क्षेत्रमा यस प्रकारको परिवर्तनले स्थान पाइरहेको छ । महिलाहरु बराबरीको माग गरिरहेका छन् । हामी कसैको तल बस्न चाहन्नौं, हामी तपाईंको सम्मान गर्छौं, तर तपाईंले पनि हाम्रो इज्जत गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।
राम्रो कुरा त के छ भने, पुरुष पनि यस्ता महिलालाई सहयोग गरिरहेका छन् । त्यसैकारण अब समय आइसकेको छ । महिलाले आफ्नो कुरा व्यक्त गर्नुपर्छ । उनीहरुले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ । धेरैजसो हामी देख्ने गर्छौं– महिला नै महिलाको लागि समस्या बन्न जान्छन् । परिवारमा सासुबुहारीको झगडा हामी धेरै अघिदेखि देख्दै आइरहेका छौं । मलाई लाग्छ विस्तारै विस्तारै महिलाले समाजमा आफ्नो स्थान पाइरहेका छन् । अझै पूरै परिवर्तन भैसकेको छैन, तर विस्तर विस्तारै हुँदैछ । यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।
बलिउडमा पनि अभिनेत्रीहरु सशक्तरुपमा बराबरीको माग गरिरहेका छन्, चाहे त्यो पारिश्रमिकमा होस् या भूमिकामा । तपाईंको समयका अभिनेत्रीहरु यी कुराहरुमा चुप बस्थे । यस्तो किन होला ?
त्यो समयमा धेरै नै डबल स्तर हुने गर्थ्यो । पुरुषको लागि छुट्टै स्तर र महिलाको लागि छुट्टै स्तर र मानक थियो । त्यो समयमा महिलाहरु त्यति आवाज उठाउँदैनथे । अहिले सुरु भएको छ, जुन एकदमै राम्रो हो । आजकलका महिलाहरु यति धेरै बोल्ड, सशतm र कमान्डिङ भएको देख्दा मलाई असाध्यै खुशी लागेको छ ।
त्यो समयमा हामीले यसरी आवाज उठाएको भए थाहा छैन के हुन्थ्यो होला । अभिनेता र अभिनेत्रीले एउटै विषयमा बोल्दा पनि त्यसको फरक फरक मतलब निकालिन्थ्यो । अभिनेत्रीको लागि फरक नियम र अभिनेताको लागि फरक नियम हुने गर्थ्यो । तर अहिले त्यस्तो छैन । अहिले यस्तो मतभेद भए कसैले पनि चुप लागेर सहेर बस्दैन ।
‘प्रस्थानम’ जस्तो पुरुषप्रधान चलचित्रमा तपाईंको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ ? तपाईंले अब पहिला जस्तो मित्रताको चलचित्र होइन प्राक्टिकल सोच भएको चलचित्र छान्छु भन्नुभएको थियो । ‘प्रस्थानम’ छान्नुको कारण के थियो ?
हो, मैले भनेको थिएँ तर हरेक निर्णय हिसाब गरेर या त बिजनेस माइन्डबाट लिइँदैन । कतिपय निर्णय मनबाट पनि गरिएको हुन्छ, जसमा मित्रताले पनि महत्व राख्छ । हरेक निर्णय व्यावसायिक सोचका साथ लिइयो भने त जिन्दगी बेस्वादिलो हुन पुग्छ । ‘प्रस्थानम’ गर्नुको प्रमुख कारण सञ्जु र मान्यता हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुको होम प्रोडक्सनको चलचित्र थियो, उहाँहरुले मलाई फोन गर्दा म निकै खुशी थिएँ र कुनैपनि हालतमा नकार्न सक्दिन थिएँ ।
म लामो समयदेखि बाबा (सञ्जय दत्त) लाई चिन्छु र बाबाले मलाई सधैँ नै धेरै माया र इज्जत दिनुभएको छ । ‘रकी’ रिलिज भएदेखि म उनको फ्यान बनेको हो । त्यसैले मलाई एकदमै राम्रो लागिरहेको छ की उनले मलाई आफ्नो होम प्रोड्क्सनको चलचित्रमा अफर गर्नुभयो । यद्यपि चलचित्रमा मेरो भूमिका लामो छैन । मेरो धेरै र लामो लामो संवाद पनि छैन । तर निकै शान्त र सशक्त भूमिका छ मेरो ।
ऊ रुढिवाढी राजनीतिक परिवारकी महिला हो , जो भित्रभित्रै धेरै पीडा र दुविधामा छिन् ।
पहिले र अहिले चलचित्र छान्ने कुरामा के परिवर्तन आएको छ ? अहिले तपाईं केको आधारमा चलचित्र छान्नुहुन्छ ?
कुनै चाखलाग्दो चलचित्रमा मलाई अफर गरियो तर त्यो छोटो रोल हो भने पनि म गर्छु । जहाँसम्म पहिलेको कुरा थियो, त्यो समयमा म लिडिङ अभिनेत्रीमा मात्रै सीमित थिएँ । त्यो भन्दा बढ्ता म गर्न पनि सक्दिन थिएँ ।
त्यो भन्दा बाहिर आएर कुनै भूमिका गर्थे त त्यसमा केही न केही गडबड भै हाल्थ्यो । अहिले म त्यो परिधिबाट स्वतन्त्र छु । म जे मन छ त्यो गर्न सक्छु । अहिले म त्यो समयको नाच्न र गाउने रहर भएकी २० वर्षकी केटी होइन । आज मैले फरक फरक भूमिका निभाउने मौका मिलिरहेको छ र म यो मौकामा मज्जाले रमाइरहेकी छु । अब त त्यो क्यारेक्टरवाला स्टेरियोटाइप पनि खतम भैसकेको छ ।
तपाईं एआर रेहमानको चलचित्र ‘९९ सङ’ र वेब सिरिज पनि गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसमा खास के कुरा छ ?
रेहमानजीको चलचित्रको बारेमा पनि मैले धेरै सोचिन किनभने उहाँको म धेरै सम्मान गर्छु । उहाँमा विश्वभरिको प्रतिभा छ । उहाँले मलाई यो चलचित्रको लागि फोन आउँदा मैले हुन्छ म गर्छु र आफ्नो भूमिकालाई राम्रोसँग निभाउछु भनेको थिएँ । एक्सपेरियन्स पनि राम्रै भयो । चलचित्रमा मेरो सानो रोल छ । वेब सिरिजको सुटिङ मैले सकाइसकेको छु । त्यसमा एकदमै महत्वपूर्ण र चाखलाग्दो रोल छ ।